ईमेलभिजन्ले ईमेल, सामाजिक र ग्राहक बुद्धिमत्ता शुरू गर्‍यो Martech Zone
मङ्गलबार, अक्टोबर 25, 2011 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
अप्रिलमा फिर्ता, हामीले त्यो घोषणा गर्यौं ईमेलभिसनले स्मार्टफोकस खरीद गरेको थियो। यो अब अक्टुबर हो र एकीकरणको नतिजा आश्चर्यजनक भन्दा केही कम छैन, ईमेल, सामाजिक र ग्राहक बुद्धिमता संयोजन एकल समाधानमा। ईमेलभिसनले आधिकारिक रूपमा रिलीजको घोषणा गरेको छ अभियान कमाण्डर उद्यम.
स्मार्टफोकस एक अविश्वसनीय प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस र स्वामित्व डेटाबेसको साथ एक ग्राहक-सर्भर समाधान थियो जसले टेराबाइट आकार डेटा गोदामहरू निर्माण गर्न सजिलो बनायो तर सजिलैसँग स्लाइस र पासा - वास्तविक समयमा एकल ड्र्याग र ड्रप इन्टरफेसमा।
स्मार्टफोकस अधिग्रहण अघि, ईमेलभिसनले उद्देश्य बजार खरीद गर्‍यो - एक सामाजिक मीडिया ड्यासबोर्ड। यस्तो देखिन्छ कि उनीहरूले आफ्नो नयाँ उत्पादन रिलिजमा सामाजिक र ग्राहक बुद्धिमत्ता टेक्नोलोजीको सर्वश्रेष्ठ सुविधाहरूको संयोजन गरेका छन्, अभियान कमाण्डर उद्यम। शब्दहरूले न्याय गर्दैन ... त्यसैले यहाँ उनीहरूले एक साथ राखेका भिडियोहरू छन्:
उद्योग समस्या के हो? अनलाइन वातावरणले डाटाको अत्यधिक मात्रा सिर्जना गरेको छ, तर विज्ञापन / मार्केटिंग उद्योगहरूको लागि ठूलो समस्या यसको साथ वास्तवमा केहि गर्दै आएको छ। डाटाबाट कार्यवाही योग्य अंतर्दृष्टि उत्पन्न गर्ने स्रोत सघन हुँदै गएको छ र on-प्रीमिस ग्राहक बुद्धिमत्ता समाधान निषेधात्मक सेटअप र इजाजतपत्र लागतको साथ आयो।
अभियान कमांडर इन्टरप्राइज संस्करणले कसरी यो समस्या समाधान गर्दछ? ईमेलविज़नले मार्केटरहरूलाई उनीहरूको ईमेल, मोबाइल र सामाजिक अभियानहरूबाट डाटा प्रयोग गर्न योग्य ब्यवहारिक बुद्धिमत्तामा द्रुत रूपमा परिवर्तन गर्न सस्तो तरीका दिइरहेको छ। यस बुद्धिमत्ताको साथ, तिनीहरू ग्राहकहरूलाई राम्रो गर्न सक्छन् र उडानमा अधिक सान्दर्भिक सन्देशहरू प्रस्ताव गर्न सक्दछन्। अन्तिम प्रयोगकर्ताहरूले अप र क्रस-बेच्ने एक्लोबाट आयमा नाटकीय वृद्धि देखेका छन्।
बीटा ग्राहकहरूले के भनेका छन्? बीटा परीक्षण कार्यक्रमका ग्राहकहरूले रिपोर्ट गर्दछ कि उत्पादनले लाखौं ग्राहकहरूको रेकर्ड खोज्ने प्रक्रियाको गति गर्दछ जुन दिन देखि मात्र सेकेन्डमा अवसरहरू पहिचान गर्नका लागि हो।
SaaS को फाइदा के हो? जबकि ग्राहक बुद्धिमत्ता मूल्यवान छ, विगतमा यो पनि महँगो भयो। अन-प्रीमिस समाधानहरू लगभग $ १M को बारे मा चलायो र कार्यान्वयन गर्न महिनौं लाग्यो। परिणामहरू बुझ्न डाटा विश्लेषकहरूले पनि लिए। अभियान कमाण्डर इन्टरप्राइज संस्करणले कसैलाई चाँडै डेटा हेर्न र नयाँ खण्डहरू विकास गर्न उनीहरूको विचारको ट्रेनलाई अनुसरण गर्न अनुमति दिन्छ जुन तुरुन्तै प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तपाइँ किन इमेलभियन्सको बारेमा ख्याल राख्नु हुन्छ? ईमेलभिसन पर्याप्त विस्तार र नवीनता को समय बाट गइरहेको छ। यस वर्ष स्मार्टफोकस र ओब्जेक्टिभ मार्केटर प्राप्त गरेपछि कम्पनीका १ countries देशहरूमा कार्यालयहरू र ग्राहक सेवा टोलीहरू छन् र उनीहरूले विश्वव्यापी रूपमा अभियानहरू कार्यान्वयन गर्छन्। नयाँ उत्पादनले ग्राहक सम्बन्धी मार्केटि programs कार्यक्रमहरूको प्रासंगिकता र नाफा अभिवृद्धिलाई उल्लेखनीय बृद्धि गर्न सबैभन्दा व्यापक, परिष्कृत अन डिमांड अनलाइन सम्बन्ध मार्केटि tool उपकरण प्रदान गर्दछ।
निक, चार्ल्स र टीमलाई ईमेलभिसनमा बधाई छ! DK New Media टीमको साथ काम गरिरहेको थियो जब उनीहरूको अधिग्रहणको समयमा स्मार्टफोकस र उद्योगमा यो क्रान्तिकारी उन्नति देख्न पाउँदा रमाईलो छ। मा प्रदर्शनको लागि साइन अप गर्नुहोस् ईमेलभिसनको अभियान कमाण्डर उद्यम साइट।
टैग: अभियान कमाण्डरअभियान कमाण्डर उद्यमईमेलभिसनस्मार्टफोकस